ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း - လုပ်ငန်းခွင်များအတွက် Careem နှင့်ငျ RTA လမ်းညွှန်👳
ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း
ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း။ ဒူဘိုင်းရှိ Uber ကားမောင်းသူဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများ စင်ကြယ်သောမောင်းနှင်မှုစံချိန်ရှိရမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦး limousine ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ကားဝန်ဆောင်မှုအားဖြင့်အလုပ်ခံရ ဒူဘိုင်း။ ထိုအ 21 ၏နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်း။ အလားအလာရှိသောယာဉ်မောင်းမှာလည်းတိုတောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ရေးကဗီဒီယိုကိုကြည့်ရပေမည်။ လိုအပျတဲ့စာရှကျစာတမျးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနှင့်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ID သို့မဟုတ်နေထိုင်ရာသက်သေပြဘို့အခွင့်လိုင်စင်ကားမောင်းခိုင်လုံသောဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယာဉ်မောင်းကသူတို့ကိုကိုက်ညီမယ့်လမ်းအတွက်ငွေရှာရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက် Uber နှင့်အတူ Start မှဘယ်လိုနေသလဲ?
Uber နဲ့စတင် Get မှလျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်?
No.1 Step - Uber နှင့်အတူအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်မယ်
ရုံများကိုသာသင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လိပ်စာနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းလိုအပ်ပါတယ်စတင်ရန် !. ကောင်းသောယခုသင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင့်မောင်းနှင်မှုအတွေ့အကြုံအကြောင်းနည်းနည်းပိုပြီး Uber ကုမ္ပဏီပြောနှင့်ကုမ္ပဏီသင်စတင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
No.2 Step သင့်ရဲ့ ID နှင့်သတင်းအချက်အလက်အချို့ကို Upload လုပ်ပါ -Then
သငျသညျသံသယသကဲ့သို့သင်တို့ကိုဆက်လက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်အချို့စာရွက်စာတမ်းလည်းမရှိ။ Uber ကုမ္ပဏီကြည့်ဖို့လိုအပျကွောငျးအနည်းငယ်စာရွက်စာတမ်းများရှိပါတယ် သင်၏လျှောက်လွှာပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မည်မတိုင်မီ.
သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်ယာဉ်မောင်းများမှာ အကယ်. :
သက်တမ်းရှိငျ RTA Card ကို
သင်တစ်ဦးခိုင်လုံသောစော်ဘွား ID ကိုရှိရမည်
သက်တမ်းရှိငျ RTA မှတ်ပုံတင်ယာဉ် Mulkiya
သင်တစ်ဦးကားမောင်းသူပရိုဖိုင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိသည်နှင့်ကုမ္ပဏီ Uber ကပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးသည် frame မကအခြားဘာသာရပ်တွေနဲ့သာကားမောင်းသူ၏ဓါတ်ပုံ, ကောင်းစွာ-lit နှင့်အာရုံထဲမှာဖြစ်ရမည်။ ဒါဟာယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံသို့မဟုတ်အခြားပုံနှိပ်ဓာတ်ပုံမဖြစ်နိုင်ပါ။
No.3 Step - တစ်ဦးအနိမ့်အင်ဂျင်ကို / ဓာတ်ဆီနှင့်မော်တော်ယာဉ်သွားကြဖို့အဆင်သင့်ရယူပါ!
သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးပိုင်ခွင့်ကဘာလဲ? သေချာတဲ့စျေးပေါသေးငယ်တဲ့အင်ဂျင်မော်တော်ယာဉ်သည်။ ထို့အပွငျက Uber လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံသေချာပါစေနှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လျှောက်ထားကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများ.
စူပါစမတ် Be နှင့်အစဉ်အမြဲသတိရ !. သင်တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာထိန်းသိမ်းခြင်းကားများပေါ်တွင်သင်၏အသုံးစရိတ်စောင့်ရှောက်လျှင်သင်ပိုမို dirham စေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်။
သို့သော်ဟုတ်ကဲ့, သင်ဆဲသင်အခုတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီမော်တော်ယာဉ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်ပင် sign up ကိုပေးနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်စစ်ဆေး Uber ကားများဖြေရှင်းနည်းများ.
No.4 Step - သင့်ရဲ့အကောင့်ကို Activate နှင့် Uber ငွေရှာ!
အခုတော့သင်ကစီမံခန့်ခွဲပါတယ်လျှင် ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာရန် လူအပေါင်းတို့သည်အထက်ပါအဆင့်များပြီးဆုံး။ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် Uber အတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ မကြာခင်ပဲ Uber သင့်အကောင့်ကိုသက်ဝင်တစ်ဦးကိုသင် 24h မှတက် 48h ယူပြီးသင့်အကောင့်အများဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုသက်ဝင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိလိမ့်မည်နှင့် သငျသညျကျိန်းသေ dirham အောင်စတင်မည်.
ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို
များစွာရှိပါသည် ဒူဘိုင်းစော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဘို့, Uber ဖြစ်ကောင်းဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Uber အလုပ်အကိုင်များရရန်, Uber က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု။ တက်လက်မှတ်ထိုးအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ပြီးပါကသကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ အချို့ကိစ္စအချိန်ယူပြီးဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျနိမ့်ဆုံးလုပ်ခထက်လျော့နည်းစေမည်ဘယ်မှာနာရီပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။
သင်တို့မူကားတစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးသင်ကအမြဲထိုကဲ့သို့သောပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်း Kareem တက္ကစီအဖြစ်အခြားကုမ္ပဏီများအတွက်မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့နေသမျှကာလပတ်လုံးအချို့ကိုသင်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်း start အဖြစ် သငျသညျကောငျးမှငွေရှာဖို့ဘယ်လိုမြင်ရပါလိမ့်မည်.
ဘယ်လို Uber ဒူဘိုင်းအလုပ်လုပ်ပါသလဲ?
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် Uber သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုပေမည်။ အလားတူပင်ကမ္ဘာ၏ကြွင်းသောအရာမှ, Uber သုံးစွဲဖို့, ရိုးရိုး, app ကို download လုပ်ပါကသင်၏ခရှာဖွေ, သင်ချင်ပါတယ်ဒူဘိုင်းအတွက် Uber စီးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ငွေပေးချေမှုရမည့် app ကိုမှတဆင့်ဖန်ဆင်းတော်နှင့်ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့နေသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Uber သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ် - အသုံးပြုသူကို select တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းအဘို့အဇိမ်ခံကားကမ်းလှမ်း; မူရင်းကတော့ Uber ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သော Uber အနက်ရောင်; ကြီးမားတဲ့အုပ်စုများသို့မဟုတ်ရိုးရိုးကြီးတစ်ခုမော်တော်ယာဉ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းအဘို့ဖြစ်၏ရာ UberXL ။ ဤသည် Uber ဒူဘိုင်းကနေအကွာအဝေးကမ်းလှမ်းတာကိုဆိုလိုတယ် ပရီမီယံခရီးသွားမှစံ.
Uber ရရှိနိုင် 24 နာရီတစ်ရက်,7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ app ကိုအသုံးပြုခြင်း, မြင်းစီးသူရဲတို့သည်နေ့ညဉ့်မဆိုအချိန်မရွေးတစ်ခု Uber ကိုတောင်းဆိုနိုင်ကြသည်။ ဒီ app အားလုံးအချိန်များတွင်နှစ်ဖက်စလုံး၏လုံခြုံရေးသေချာသည်မြင်းစီးသူရဲကိုသူတို့ရဲ့ယာဉ်မောင်း၏ရုပ်ပုံနှင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရောက်လာမည်သည့်အခါကြည့်ဖို့အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်ကားမောင်းသူကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးတက္ကစီ၏ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ် 44 မိုင် 10 AED (အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု Dirham) ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ Uber နှင့်အတူ, ဒီတူညီတဲ့အကွာအဝေး 28 AED ဖို့ပိုမိုနီးစပ်သည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကတော့ Uber လစာတစ်နာရီလျှင် 30-50 AED န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Uber ဖုန်း app ဒေသခံဧရိယာ၌ယာဉ်မောင်းမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုပို့ပေးသည်။ ဤအ drivers တွေကိုတစ်ခုမှာထို့နောက်လက်ခံ အလုပ် သင့်ဦးတည်ရာကနေစုဆောင်း။ ကြောင့်ဒီစနစ်ဖို့, Uber တိကျတဲ့ယာဉ်မောင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုက်ညီနိုင်မဟုတျပါဘူး။ သင့်ရဲ့ခရီးပြီးနောက်အမည်မသိတုံ့ပြန်ချက်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်ဒရိုင်ဘာကိုတန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုဖို့ option ကိုလည်းမရှိ။ Uber ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျှော်လင့်ထားသည့်အဆင့်မှာသာဆက်လက်ရယူထားသေချာစေရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဲဒါကိုရကျိုးနပ်သည်ဒူဘိုင်းရှိ Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း။
ဒါကြောင့်တစ်ဦး UberXL ကဘာလဲ?
အတော်ကြာန်ဆောင်မှုများရှိခြင်း Uber ။ ဥပမာတစျခုကတော့ Uber XL ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Uber ကုမ္ပဏီအတွက်အတော်လေးသီးခြားန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ Uber XL သငျသညျစံမြားကိုထက်တစ် SUV ကားများနှင့်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ကားတွေမောင်းပေးနိုင်ပါတယ်တစ်ခုစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ကားတစ်စီးဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦး UberXL ကဘာလဲ? ဒါဟာ Uber များအတွက်ရိုးရှင်းသောလုပ်အထူးကြီးတွေအစ်ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်အနေဖြင့်ထိုကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အဖြစ်သေချာဘို့အကြောင်းတဦးတည်းကားထဲတွင်လူများ၏တစည်းနှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာသင်ဖောက်သည် Uber မှပေးနိုငျကွောငျးန်ဆောင်မှုများပိုမိုကျယ်ဝန်းစီးနင်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် UberXL ။
သငျသညျကျိန်းသေ UberXL သင်သည်လည်းပေးနိုင်ပါသည်ကားဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, တွင်းအိတ်ကပ်ထဲမှာပိုက်ဆံမလောင်ဘဲလူတွေကိုကူညီနိုင်သည်။ Uber XL အတွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်တစ်ခုသင် SUV ကားသို့မဟုတ်မီနီဗန်အတွက် client များတက်ခူးပါလိမ့်မယ်။ ထိုသို့ဒါသူတို့အားကားအများစုမှာမှာအနည်းဆုံး 6-8 လူတွေ fit နိုင်ပါတယ် ပါတီသို့မဟုတ်မိသားစုအစည်းအဝေးအဘို့ကောင်းသော.
ဘယ်လိုတစ်ခု Uber ကားမောင်းသူဖြစ်ခြင်းသလဲ?
သြဂုတ်လ 2013, Uber အတွက်၎င်း၏ပစ်လွှတ်ကတည်းက အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေသွားပြီ။ သတင်းအချက်အလက်လွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်အွန်လိုင်း Uber စံတက္ကစီထက် 30% ပိုမိုအားသွင်းဖို့မလိုအပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုစဉ်မှာအခြားဒေတာများကိုလည်းရရှိနိုင်အွန်လိုင်း Uber အားဖြင့်တရားစွဲဆိုအမှန်တကယ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းတခြားနေရာကမ္ဘာပေါ်မှာနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖြစ်သည့် '' ပုံမှန် '' တက္ကစီထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု တစ်ခုခု Uber အပေါ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်အခြေခံနှင့်ဂုဏ်ယူကြသည်။
ကြောင့် Uber ယာဉ်မောင်းတစ်ဦး limousine ကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားသည်အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းရန်, drivers တွေကိုသူတို့ဤအရပ်ဌာန၌မဖြစ်သင့်နိုင်သလောက်လုပ်မပေးစေခြင်းငှါအဓိပ်ပာယျ, သူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်အဖြစ် Uber နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခကြေးငွေကိုမျှဝေရပါမည်။ ဤသည်ကိုလည်း Uber drivers တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ် အိန္ဒိယ exats အဖြစ်အလုပ်လုပ်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနှင့်နှေးကွေးကာလအတွင်းမှာ Uber သို့ပြောင်းပါ။ ၏သင်တန်း, ဒီ Uber ခြုံငုံယာဉ်မောင်းများအတွက်ပိုမိုအကျိုးအမြတ်အောင်, သူတို့ကမြျှောလငျ့နိုငျတစ်ခုတည်းသောဝင်ငွေမဟုတျကွောငျးကိုဆိုလိုသည်။
ရိုးရာတက္ကစီန်ဆောင်မှုများနှင့်မတူဘဲ Uber drivers တွေကို Uber တစ်ဦးငှားရမ်းစျေးနှုန်းပေးချေရန်မလိုပါ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်, မကိုသူတို့အစုနာရီလုပ်ကိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ Uber နှင့်အတူ, ယာဉ်မောင်းသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဇယားသတ်မှတ်ပြီးထို့ကြောင့်သလောက်သို့မဟုတ်အဖြစ်အနည်းငယ်သာသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Uber နှင့်အတူယာဉ်မောင်း Start
ဤတွင် Apply: https://www.uber.com/drive/requirements/
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက် Uber နှင့်အတူမောင်းဖို့ဘယ်လို ?. အဆိုပါ Uber ကုမ္ပဏီတကယ်ကသူတို့အံ့သြဖွယ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသောလမ်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရုံကသူတို့ရဲ့ website သို့ပေါ်တက်မနာသီချင်းဆိုခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးသွားလာရင်းရှိနိုင်ပါသည် !.
ဒူဘိုင်းအတွက် Uber တို့သည်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်သူဌေးဖြစ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောယူအေအီးအဖြစ်အလွန်ခက်ခဲစျေးကွက်အပေါ်ငွေရှာဖို့။ သငျသညျမင်ျဂလာရှိလိမ့်မည်ပေမယ့်လူတွေအများစု Uber နှင့်အတူမောင်းထုတ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီမသာ။ ထိုသူတို့ကရှိပြီးသားဒူဘိုင်းအတွက် Uber နှင့်အတူငွေရှာနေကြသည်။ ဥပမာ, အင်ဒီးယန်းများနှင့်ပါကစ္စတန်ပြီးသားဒူဘိုင်းအတွက် Uber များအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ငွေရှာ.
အဖြစ်မှန်မှာတော့သင် Uber နှင့်အတူဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက်မောင်းနှင်နေလျှင်သိပ်သိရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ နီးပါးရှိသောကြောင့်ထိုမြို့အံ့သြဖွယ်နေရာများ 24h ငွေရှာဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ.
သင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလုပ်ရရန်ကြိုးစားသင့်ထိုကဲ့သို့သော Uber ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများ
Careem ဗိုလ်ကြီး (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://drive.careem.com/
Careem ဗိုလ်ကြီးကကြည့်ရှိသည်ဖို့တန်ဖိုးရှိအခြားကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအလုပ်လုပ်နိုင် အတိအကျ Careem ကပ္ပတိန်နဲ့ Uber ယာဉ်မောင်းအဖြစ်။
1 ။ အဆိုပါ website တွင်ကိုယ့်ကိုကိုယ် Register: ထိုအခါကအလွန်လွယ်ကူသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အပေါ်ဆုံးမှာပုံစံဖြည့်စွက်ပြီး Careem ဗိုလ်ကြီးဖြစ်လာသက်ဆိုင်ပါသည်။
2 ။ သင်သည်သူတို့၏အသင်းအနေဖြင့်တစ်ဦးကိုဖုန်းဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါ, ထို့နောက်သင်သည်အလွန်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးရှိရမည်။ သင်၏လျှောက်လွှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကပ္ပတိန်ကုမ္ပဏီသုံးသပ်ပြီးနောက်လေ့ကျင့်ရေး session များအတွက်သင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
3 ။ စီးနှင့်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံပါစေ။ လေ့ကျင့်ရေးပြည့်စုံသောအခါ, သငျသညျငွေရှာဖို့စတငျနိုငျ!.
ယနေ့ Careem ဗိုလ်ကြီးနှင့်အတူစတင်ရန်!
Talixo ကုမ္ပဏီ (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://talixo.com/careers/
Talixo ကုမ္ပဏီစာအုပ်ဒူဘိုင်းအတွက်ယခုသင့်တက္ကစီ။ ဒါကသူတို့ရဲ့ website ဟုကကျိန်းသေစစ်မှန်သောကြေညာချက်သည်အဘယ်အရာသည်။ Talixo အတူသင်တို့, တစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်စီးပွားရေးကို class နဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများ.
ဒီကုမ္ပဏီ၏ကောင်းသောအချက် Talixo အဖွဲ့အစည်းကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် 949 မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုငျသညျပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် အလွန်သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် start ကယ်တင် တက္ကစီမောင်းသူအဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ?. သင်တစ်ဦးအချိန်ပေါ်နှင့်ထိရောက်သောကိစ္စရပ်များသင်၏အထဲမှာပိုက်ဆံရလိမ့်မည်ဟုကြီးမားအာမခံချက်ရှိပါသည်။
RTA တက္ကစီ (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.rta.ae/links/special_needs/en/taxi.html
ကောင်းပြီ, သင်ကနည်းနည်းပိုခက်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ငျ RTA တက္ကစီနဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့။ RTA တက္ကစီ ဒါကြောင့်အစိုးရ related ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်အတော်လေးကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးအရာအားလုံးလုပ်ခလစာနှင့်အတူ ok ဖြစ်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကယ်တင်သင့်တယ်အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ပေးလိမ့်မည်။
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကျိန်းသေငျ RTA တက္ကစီနဲ့အလုပ်ရတဲ့အောင်မြင်ရန်အတော်လေးခက်ခဲတဲ့တာဝန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ် ကျွမ်းကျင်သူများလမ်းညွှန် - အစဉ်အမြဲဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအဖွဲ့ ကုမ္ပဏီများအားဖုန်းခေါ်ပေးရကျွမ်းကျင်သူများအားပေး အများကြီးပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့ထိုသူတို့တောင်းဆိုနေတာ။
ဤတွင် Apply: https://www.dubaitaxi.ae/en/Careers
high-Class ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတက္ကစီန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတက္ကစီကဲ့သို့တူညီသောအရာမဟုတ်ပါဘူးဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်း, စကားပြော။ ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကနှင့်အတူ, သငျသညျအချိန်ပြည့်အလုပ်အကိုင်အရပါလိမ့်မယ် အများစုကိစ္စများတွင်အံ့သြဖွယ်ကားမောင်းရန်။ ၎င်းတို့၏ရေတပ်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောတက်စလာနဲ့ Mercedes အဖြစ်ကားများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဒူဘိုင်းတက္ကစီကော်ပိုရေးရှင်း။ ဒါကြောင့် point တွေထဲကတစ်ခုကိုသင်သိသင့်: ဤကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကနယ်လှည့်န်ဆောင်မှုတစ်ခုဂိမ်းထဲမှာထိပ်ဆုံးခွေးဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျကားမောင်းသမားနှင့်တက္ကစီယာဉ်မောင်းအတွေ့အကြုံရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးပါသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှအဆင့်မြှင့်သတင်းအချက်အလက်များမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော်သင်သိရ ကုမ္ပဏီကျွမ်းကျင်သူများအလုပျသမားမြားအတှကျအလှနျကောငျးပိုက်ဆံပေးချေ.
ဤတွင် Apply: http://www.oneroadtaxi.com/career.htm
တဦးတည်းလမ်းမကြီးတက္ကစီဌားရမ်းနေပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ကြီးထွားလာအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လိုလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကစကားပြောသင့်ပါတယ်။ တစ်ခုမှာလမ်းတက္ကစီများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုရှာနေတာဖြစ်ပါတယ် အသစ်သောဝန်ထမ်းများအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းရန်.
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲအသစ်အအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်ရှာဖွေနေသည်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံအားလုံး၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များကမိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်တက္ကစီယာဉ်မောင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျကလူအချိန်မှာမိမိတို့လိုရာခရီးကိုရောက်ရှိကူညီမှုအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်သစ္စာရှိမှုနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလျှင်။ တစ်ခုမှာလမ်းတက္ကစီကြည့်ယူ ကျေးဇူးပြု. ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်လက်ရှိနေရာလွတ်.
ဤတွင် Apply: http://www.safetransme.com/index.html
ကောင်းပြီ-positioned နှင့် စူပါမှာ google Oriental ကုမ္ပဏီ။ လူတွေအများအပြားကဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအသုံးပြုနေသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအပြေးဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ သို့သော်၎င်းတို့၏ website တွင်မဆိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပိုင်းကိုရှာဖွေဖို့လမ်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, သူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးရကျိုးနပ်စကားပြော သူတို့အချို့နေရာလွတ်ရှိခြင်းလျှင်ပဲတောင်းဆိုနေတာ တက္ကစီမောင်းသူအဖြစ်။
စီးတီးတက္ကစီ AE (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: http://www.citytaxi.ae
အဆိုပါစီးတီးတက္ကစီတစ်အတော်လေးဟောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရှင်းစီးတီးတက္ကစီ AE ယခုနှစ် 1983 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမူကား, စစ်ဆင်ရေး၏အနှစ်အဘို့, ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သောအများအပြားန်ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြု ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီမှမဆိုရာအရပျမှလူပို့ဆောင် လည်းပြည်ပမှာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့အသေးငယ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုနေသည်။
ဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလွန်ကောင်းသောအချက်သူတို့ငှားရမ်းနေကြသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျကသူတို့ရဲ့ website သို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်၏ CV ကိုတိုက်ရိုက်လျှောက်ထား။ ကိုယ့်ဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုလူကိုယ်တိုင်ဖုန်းခေါ်ပေးပါ။ စီးတီးတက္ကစီများ၏မန်နေဂျာများပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် အလုပ်အကိုင်ရဖို့သင်ကူညီ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းအဖြစ်။
ဤတွင် Apply: http://www.arabiataxi.ae/Dubai/en/career.html
အာရေဗျတက္ကစီဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့အချည်းနှီးဖြစ်၏ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်လည်းဒီကုမ္ပဏီမှာထားရှိခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာ t ကိုသင်ကူညီကြလိမ့်မည်ယုံကြည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယူအေအီးအတွက်အတော်လေးကြမ်းတမ်းအလုပ်ဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိ.
ဒါကကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်ကြီးထွားလာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့အပြည့်အဝလိုက်နာရဖို့စီမံခန့်ခွဲသောတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီဖြစ်ကြောင်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခွင့်အာဏာတို့အတွက်။ အာရေဗျတက္ကစီတစ်ဦးကဲ့သို့ကြည့်ဖို့ထိုက်တန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှာဖွေသူ.
ဤတွင် Apply: http://www.carstaxi.ae/en/public/page/contact
ဒါကကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်လည်ပတ်မသာ။ ကုမ္ပဏီက အလွန် Arabic အဘိဓါန်ယဉ်ကျေးမှု အမြဲတမ်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လျှောက်ထားသောသူအပေါင်းတို့သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားနေ။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းလာရောက်ပူးပေါင်းသင်အများကြီးပိုပြီး option ကိုရောက်ရှိဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအားငါပေးမည် သင်၏အသက်တာနှင့်အာရပ်အိပ်မက်များအတွက်.
Sharjah တက္ကစီ (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.shjtaxi.ae/careers
တစ်ဦးက 100% Sharjah orientated တက္ကစီကုမ္ပဏီ။ သို့သော်ဤအခိုငျအမာလည်းဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွင်းလည်ပတ်နေသည်။ Sharjah တက္ကစီကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တက္ကစီယာဉ်မောင်းလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ယူအေအီးအလင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, GCC အလင်းတရားဝင်လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏လက်၌ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်သေချာပါစေ။
ဒါကကုမ္ပဏီကောင်းစွာအလုံအလောက်ချေ, သင် AED ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်။ 3,000 / - AED.10,000 / မှ - တစ်လလျှင်သင်၌တစ်ရက်လျှင် 8h ထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်ထိုသူတို့ရှိနိုင်ပါသည်ဒီလိုအဖြစ်ကုမ္ပဏီများနှင့်စကားပြောခြင်း။ သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်က်ဘ်ဆိုက်ဗားရှင်းမှာကြည့်ပေးပါနဲ့ သငျသညျအလုပျမှစိတ်ဝင်စားသာလျှင် apply တစ်ဦးတက္ကစီယာဉ်မောင်းအဖြစ်။
ဤတွင် Apply: http://thedriver.ae/contact-us.html
အဆိုပါယာဉ်မောင်းကုမ္ပဏီရှိပါတယ် လူအပေါင်းတို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုကျော်အတွေ့အကြုံအနှစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ ဒါကကုမ္ပဏီယူအေအီးအများပြည်သူအလွန်ဆန်းသစ်နှင့်ထူးခြားသောကားမောင်းသမားဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်နှင့်အတူတစ်ဦးအလုပ်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်ဖော်ပြချက်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။
တစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏ဒူဘိုင်းအတွက် Uber-ကုမ္ပဏီရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်မောင်းသူကုမ္ပဏီမခေါ်နိုင်ပါ။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သူတို့သင်တစ်ဦးဦးတည်ရာအမှတ်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကဒူဘိုင်းရဲ့လမ်းများနှင့်ပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (RTA) နဲ့မှတ်ပုံတင်ရသည်။ ဒီတော့ 100% လွယ်ကူပြီး သငျသညျကောင်းစွာပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာကုမ္ပဏီကယ်တင်.
Tawasul တက္ကစီ (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: http://www.tawasul.ae/
Tawasul တက္ကစီဗေီစကားပြောအလုပ်သမားတွေအတွက်အဓိကအားဖြင့်တစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သျောလညျး သငျသညျအခြို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုရှာတှေ့နိုငျ။ ဒါကကုမ္ပဏီစံ options များပေးအပ်သည်ကိုသင်လိုင်စင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျသစ်တစ်ခုကားတစ်စီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအကြောင်းကိုသူတို့ကိုစကားပြောနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အမှုနှင့်အတူ, သင်ပင်မြျှောလငျ့နိုငျတာလျော့နည်းပိုက်ဆံစေမည်။ သို့သျောလညျးပဲသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကားနှင့်အတူပါကလုပ်ကိုင်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤတွင် Apply: http://indigorentacar.com/contact
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကားမောင်းသူကိုစတင်ရန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ မဲနယ်ငှားတစ်ဦးကကားခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဆိုရမှာပါ။ တစ်အချက်ဖြစ်ပါသည်။ မဲနယ်တစ်ကားကုမ္ပဏီတန်ဖိုးများ, ရိုးရှင်းသောများမှာသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ပျော်ရွှင်စေခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းစောင့်ရှောက်ငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေတစ်ဦးနှင့်တူပုံရသည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ.
အရာအားလုံးမဲနယ်ကုမ္ပဏီဖောက်သည်တွေနဲ့မောင်းနှင်န်းကျင်ဆုံလည်ဘို့ဖန်ဆင်းထားသည်ကြဘူး။ ထိုအသေချာဤရည်ရွယ်ချက်များမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့မှန်ကန်သောလမ်း။ ကြောင်းမဲနယ်ထက်အခြားစျေးကွက်ကားမောင်းဒူဘိုင်းတက္ကစီများစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုအပေါ်ယူအေအီးအာရုံထဲမှာကားတစ်စီးကုမ္ပဏီငှားရမ်း။
စီးတီး 555 ဇိမ်ခံကားပို့ဆောင်ရေး LLC (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: http://city555luxury.com/about-us/
အကောင်းဆုံးကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တဦးတည်းရှိခြင်းသည်အဆိုပါစီးတီး 555 ဇိမ်ခံကားပို့ဆောင်ရေး LLC ။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းက 2007 အတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူကမူလတန်းလှုပ်ရှားမှုများကားတစ်စီးဇိမ်ခံခရီးသွားလာများမှာရဲ့စကားပြော ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကို။ ဟိုတယ်ဧည့်ခရီးသွားများထံမှအဓိကအားဖြင့်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုမိန့်ပြည်သူ့။ ထိုမှတပါး, ကုန်တိုက်ကြီးတွေနှင့်စားသောက်ဆိုင်များယူအေအီးကျော်အားလုံးအတွက်ဖွင့်ကောက်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းယူအေအီးအတွက်အများအပြားကြီးတွေကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒီတော့အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာဟာအပျော်အပါးအလွန်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လိမ့်မည် ပြည်ပမှာသို့မဟုတ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကနေဒေသခံနိုင်ငံသားများအဘို့အရာမှမဆိုပြည်တော်ပြန်များအတွက်.
connection ကိုကားမောင်းသမား (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.limo-uae.com/contactus.htm
Limousine, အားကစားကားများနှင့်အံ့သြဖွယ်စျေးကြီးကားများ။ ဒါကအားလုံးကားမောင်းသမားပိုငျဆိုငျ ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကားမောင်းသမားကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကားမောင်းသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ client များအတွက်အမှန်တကယ်ထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အတွက်မာနထောင်လွှားကြာပါသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖုန်းခေါ်ပေးရတကယ်ပဲထိုက်သည်သို့မဟုတ် ပဲသူတို့ကိုအလုပ်တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့.
ဒါကကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ သူတို့ရဲ့ clients များဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ သို့မဟုတ်ပင် အဘူဒါဘီဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစည်းအဝေး။ ထိုမှတပါး, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းစွာ-branded စားသောက်ဆိုင်, ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကသင်သည်သူတို့၏ limousine အထဲမှာအနားယူပြီးဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းအတွက်သင်တို့နှင့်အတူရှိနှင်ထုတ်မည်ကူညီပေးသည်။
ပုဂ္ဂလိက Limousine (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: http://www.prvtlimousine.com/contact.html
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ပုဂ္ဂလိက Limousine ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပုဂ္ဂလိက Limousine ယူအေအီး အဖွဲ့အစည်းကဒူဘိုင်း၏ဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုအတူလုပ်ကိုင်။ အဓိကဝန်ဆောင်မှုများကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအပ်နှင်းပါပြီ။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့် VIP ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်, စကားပြောထိပ်တန်းအဆင့်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ကြသည်။
ပုဂ္ဂလိက limousine ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်နေစဉ်။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းအများစုဟာဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်သီးသန့် chauffeured န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်ယခုထက်ပိုမိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၎င်း၏ဖောက်သည် VIP သည်။
တော်ဝင်မတ် Limousine (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: http://royalsmartlimousine.com/contact.php
BMW ကားစီးရီး7နှင့် Lexus Es350 နှင့်အတူကုမ္ပဏီ။ ဇိမ်ခံခရီးသွားလာစျေးကွက်အပေါ်တစ်ဦးကအမှန်တကယ်လွှမ်းမိုးသောကုမ္ပဏီ။ တော်ဝင်မတ် Limousine ကုမ္ပဏီတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဇိမ်ခံခရီးသွားလာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှု.
ဤသည်အံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုပင်လယ်ကွေ့ဒေသအတွင်းကုမ္ပဏီများ၏ Rashid Al-Jabri Group ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ Rashid Al-Jabri အားဖြင့် 2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကတည်းကသူတို့န်ထမ်းများ၏အကောင်းတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုငှားရမ်းထားပါသည်။
တစ်ဇိမ်ခံခရီးသွားလာဈေးကွက်၌သင်တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကကြီးထွားဖို့ကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ ဒါကအဖွဲ့အစည်းကအလုပ်မှတပါး, အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အဖြစ်အလွယ်တကူ ပိုပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်သားများငှားရမ်းရန်မရရှိနိုင်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကုမ္ပဏီများနေဆဲစူပါအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ နှင့်ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူများလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းန်ထမ်း။
Wadi ပ်ပို့ဆောင်ရေး (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.swattransport.ae/
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာကောင်းသောကုမ္ပဏီ။ Wadi ပ်ပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီမှသာကားကိုအမြတ်ရခြင်းအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကခရီးသည် get နှင့် mini busses အတွက်သူတို့နှင့်အတူသွားလာစီမံခန့်ခွဲရသည်။
Wadi သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဦးဆောင်ဘတ်စ်ကားငှားရမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီအဖှဲ့အစညျးနှငျ့အလုပျ နှင့်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မီနီဗန်အပါအဝင်မောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများကိုငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်သင်က Sharjah, ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဘတ်စ်ကားငှားရမ်းကုမ္ပဏီများအတွက်ရှာကြသည်မှန်လျှင်, သင်ဤကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပျအတှကျလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
Limo ကားငှားရမ်းမှု (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://www.limoinuae.com/contact
High-လူတန်းစားန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ Limo ကားကိုငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်းနေ။ သငျသညျ Lexus-တိုယိုတာရှိခြင်းနှင့်အများကြီးပိုပါလိမ့်မည် !. ဒါကကုမ္ပဏီသူတို့ကိုသင်ဖုန်းခေါ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ ပဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ရိုးရှင်းစွာနေရာလွတ်နှင့် ပတ်သက်. သူတို့အမေးမြန်းခြင်း နှင့်သင်တတ်နိုင်သလောက်သူတို့ကိုအဖြစ်အစာရှောင်ရ။
ဤတွင် Apply: https://orangeauto.ae/contact-us/
Google ကမြေပုံလိမ္မော်ရောင်အော်တိုကုမ္ပဏီကိုချစ်။ သင်ကိုယ်တိုင်စစျဆေးနိုငျ လိမ္မော်ရောင်အော်တိုအကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ သူတို့ရဲ့ google ငါ၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပရိုဖိုင်းတွင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဖြေကုမ္ပဏီယူအေအီးအတွက်အလွန်ကောင်းစွာရွေ့လျားနေသည်။ ဒီလိုအဖြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက် Uber မှကောင်းသောပြိုင်ဘက်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့တစ်တွေပုံမှန်ကားကိုအမြတ်ရခြင်းအစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပေမယ့် ဆဲအလုပ်လျှောက်ထားရန်ထိုက်တန်.
Uber အကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့ စားဟင်းလျာများ (ဒူဘိုင်း)
ဤတွင် Apply: https://uber.com/drive/delivery/
Uber ကဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းအလုပ်အကိုင်သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစားတတ်၏။ သငျသညျဥပမာစားသောက်ဆိုင်၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုများအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင် Mc.Donald ရဲ့ သို့မဟုတ်ပီဇာတဲနှငျ့သငျကောင်းသောပိုက်ဆံစေမည်နေစဉ်ဆာလောင်မွတ်သိပ်လူတွေကိုအစားအစာကယ်နှုတ်တော်မူ။
အလုပ်၏ဤမျိုးရဖို့ သင်တစ်ဦးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး !. သငျသညျသေးငယ်တဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပင်စက်ဘီးပေါ်ကြောင်းလုပျနိုငျနှငျ့သငျရှိအလုပျလအနည်းငယ်အကြာတွင်ကျိန်းသေမထိုက်မတန်ရဦးမည်ဆိုသောကြောင့် !. ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်းရန်နောက်ထပ်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Ola မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်း (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://www.olacabs.com/careers
Ola ကားတစ်စီးငှားရမ်းလျှောက်လွှာများနှင့်ယခုကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီခရီးသွားစျေးကွက်၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအတော်လေးအရေးကြီးပါသည်ကယုံကြည်ကြသည်။ Ola ကားတစ်စီးငှားရမ်းဝန်ထမ်း Ola ရဲ့ပိုကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်တန်ဖိုးများကိုကြုံးဝငျပတျသကျ။ အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဗြိတိန်နှင့်အိန္ဒိယအတွက်ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ Ola ကားတစ်စီးငှားရမ်းသည့်အစွမ်းကုန်ဖန်တီးမှုခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုလေ့ကျင့်ရန်၎င်း၏ဝန်ထမ်းများကိုအပေါငျးတို့သတွန်းအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကခရီးသွားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးနင်း-sharing ကုမ္ပဏီများသည်တစ်ဦးအဖြစ်။ Ola ကားတစ်စီးငှားရမ်းစမ်းသပ်တစ်ခုစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းအတွက်မာနထောင်လွှားကြာနှင့် ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဆန်းသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း!.
ဤတွင် Apply: https://www.gocatch.com/
အဆိုပါ GoCatch ကုမ္ပဏီသြစတြေးလျရဲ့ပရီမီယံတက္ကစီမောင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, ကသင့်ရဲ့ကားကိုမောင်းနိုင်သောအများအပြား options များဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုယာဉ်မောင်းအဖြစ်တက္ကစီကွန်ယက်ကိုယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်ပင်ပရီမီယံကားမောင်းသူသည်။ သို့သော်ဤကုမ္ပဏီလည်း အကောင်းတစ်ဦးလက်တွဲကမ်းလှမ်း။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စင်းကိုရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ကားများကသူတို့ကိုထွက်ငှားလို့ရပါတယ်။
GoCatch ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်သြစတြေးလျအတွက်ငွေပေးရသည့်တက္ကစီနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ထားသောတက္ကစီယာဉ်မောင်း၏အကြီးဆုံးရေတပ်ပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ကုမ္ပဏီအလုပ်အကိုင်ရဖို့ကယ့်ကိုထိုက်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကနိုင်ငံတကာ Uber အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတစ်မျိုးရှာနေလျှင်။ သငျသညျကျိန်းသေသြစတြေးလျအတွက် Catch က်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါရန်လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။
Kapten ယာဉ်မောင်း (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://www.kapten.com/
Kapten ကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နိုင်ငံများတွင်ယခုအချိန်အထိလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ပြင်သစ်ပဲရစ်, လိုင်ယွန်နှင့်ကိန်းအတွက်သူတို့ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဂျီနီဗာရှိလစ္စဘွန်းနှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထိုမှတပါး, Sunshine ရုပ်ရှင်ပေါ်တူဂီ။ ဤ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအရမ်းအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်အတွက် operating ဖြစ်ပါတယ်.
သူတို့ရဲ့ယာဉ်မောင်းပညာရှင်ပီသစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အကောင်းဆုံးဖောက်သည်များန်ဆောင်မှုများပေးရန်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ် သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်လာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု.
တစ်ဦးကဒေသခံ reactive နှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
ဤတွင် Apply: https://gett.com
ရယူမည်တက္ကစီကြီးထွားလာသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးထိုသူတို့အဘို့အဓိကစျေးကွက်ဣသရေလအမျိုး, ရုရှား, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့် New York မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနာဂတ်မှာကြီးထွားဖို့ရှာဖွေနေကြောင့်သို့သော်ဤကုမ္ပဏီ, ဤနေရာများကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်သင်ကကျိန်းသေသင့် သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက်ဘ်ဆိုက်အပိုင်းအပေါ်လျှောက်ထားရန်စီမံခန့်ခွဲ သူတို့ဥပမာ, ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီများအတွက်, မည်သည့်သစ်ကိုဒေသခံတစ်ဦးကြည့် updated လုပ်ခဲ့ပါပြီ။
ဤတွင် Apply: https://cabify.com/en/drivers
Cabify နှင့်အတူမောင်း။ ကမ္ဘာတဝှမ်းစူပါလူကြိုက်များကုမ္ပဏီ !.
ဒါကကုမ္ပဏီကိုပုံမှန်အတိုင်းများအတွက်ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှု, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက်နံပါတ်တစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလွန် ပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်းသူလူကြိုက်များကုမ္ပဏီ။ သင်ကလေဆိပ်မှဒါမှမဟုတ်အလုပ်အစည်းအဝေးလူတို့နှင့်အတူစီးကိုကူညီခြင်းနှင့်ဘက်ခြမ်းမှာငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာငွေရှာယေဘုယျအားဖြင့်လူပေါင်းအိမ်ပြန်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ရဖို့ကူညီပေးနေစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ Cabify စီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ထမ်း, client များသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ဖြစ်၏။ မည်သူမဆိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ငွေရှာနိုင်.
အဆိုပါ Cabify န်ထမ်းမှာအလုပ်လုပ်ကောင်းစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ခရီးသွားနှင့်အဆင့်အထိကိုယ့်မှာကုမ္ပဏီအောင်သင်သိရနေကြတယ်t ကိုကိုယ်အဘို့ကိုယ့်အားသာချက်ဖြစ်စေပါတယ်.
ဤတွင် Apply: https://www.ingogo.com.au/driver
ဒါကြောင့်သင်အစက်အပြောက်ပေါ်တွင်သင်၏တစ်နေ့တာစီစဉ်နိုင်အောင်ရှေ့ဆက် 48 နာရီအထိသင်၌စုသိမ်းကိုစမတ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆိပ်ကမ်းများနှင့်သီးသန့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းဘို့စီမံခန့်ခွဲနိုင် Ingogo ။ သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမန်နေဂျာမှအဖြစ်ပိုပြီးပိုက်ဆံပေးဆောင်သူကိုကော်ပိုရိတ် client များထံမှထပ်အမိန့်ရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသြစတြေးလျကနေဖြစ်ပြီးစစ်မှန်သောလူတို့နှင့်အတူခေါ်ဆိုမှုစင်တာအများစုသင်တို့အဘို့ရှိပါတယ်ကူညီဖို့ရန်။ ဒါကြောင့်သင်က Ingogo ကုမ္ပဏီနှင့်စတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်
ဆစ်ဒနီ, မဲလ်ဘုန်း, Adelaide, ဘရစ္စဘိန်းနဲ့ပါ့အတွက်တည်နေရာများကိုထောက်ပံ့။ ငါတို့သည်သင်တို့သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုက်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ရှိခြင်းနေကြသည်။
ဤတွင် Apply: https://www.itaxi.pl
ဒါကကုမ္ပဏီယာဉ်မောင်းများအတွက်အရောင်လူကြိုက်အများဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကျိန်းသေယခုစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေသည်အဖြစ်ပိုလန်တွင်ကောင်းသောအမှုကိုကုမ္ပဏီရှာဖွေနိုင်သည်။ iTaxi ပိုလန်အတွက်မိုဘိုင်း application ကိုသုံးစွဲဖို့အခမဲ့လွယ်ကူပါတယ်။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီ သငျသညျပိုလန်၌သူတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမပြောတတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ iTaxi ကုမ္ပဏီပိုလန်အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်အပေါင်းတို့နှင့်အဓိကအရောင်မြို့ကြီးများအတွက် operating လူများအများဆုံးနိုင်ငံခြားသားများနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်နေရာကို Krakow နှင့် Warsaw ကိုပေးသည်။
ဒါကကုမ္ပဏီသုံးစွဲဖို့သင်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတော်မူမည်, သင်ဤနည်းအတူငွေရှာလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ iTaxi တစ်ခုသာအရောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကွက်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းနှင့်အတည် ပြု. ယာဉ်မောင်းနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုဆက်သွယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကအေးဆေးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဦးတည်ရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အရာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုလန်အတွက်ငွေရှာနှင့်သင့်ကိုပေးပို့ ပြည်ပမှာမိသားစု.
Lyft နှင့်အတူမောင်း (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://www.lyft.com/driver
Lyft အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါရှိအမေရိကန်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ သို့သော်ဒီကုမ္ပဏီအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှမရွှေ့မည်ကိုကန့်သတ်သည်မဟုတ်။
Lyft ကသူတို့ယာဉ်မောင်းများအတွက်အလွန်ကောင်းသောစနစ်အရှိခြင်းနှင့်ကျိန်းသေ, ကကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သူတို့ဒူဘိုင်းစီးတီးသို့ပြောင်းရွှေ့လာသောအခါအလုပ်လုပ်ရန်အဖှဲ့အစညျး။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်တော် lyft ကုမ္ပဏီယူအေအီးမှရွှေ့ဖို့ရှာဖွေနေကြောင်းသိကြပေမယ့်ကုမ္ပဏီအတိအကျရက်စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေ။
သင်ပြုလေရာရာ၌အရာအားလုံးကိုအတွက် Lyft လွတ်လပ်ခွင့်, သင့်ရဲ့အလုပ်ကောင်းတဲ့နှင့်အဆင်ပြေဖြစ်ခွင့်ပြု။ မြေပြင်ကိုချိုးဖောက်စိတ်ကူးများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါမှာရှိတဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်တိုးဝင်ငွေကိုစတင်ရန်သင်သေချာသည်တစ်ဦးကောင်းသူတစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။
LeCab တက္ကစီ (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://en.lecab.fr/our-services/order-cab-in-paris.html
Lecab တက္ကစီကဒူဘိုင်းအတွက် Uber ကဲ့သို့သောပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက LeCab ကုမ္ပဏီသာသာပဲရစ်အမှန်တကယ်အတွက်အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူကလူများအတွက်ဦးဆောင် Parisian ပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ , အဆင်ပြေစိတ်ချရပြီးတတ်နိုင်: ထို့ကြောင့်, LeCab တိုင်းပဲရစ်လူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုရန်ကိုချစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။
ဒါကကုမ္ပဏီ 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ. ကုမ္ပဏီကူညီပေးနေလူတွေထိုကဲ့သို့သောတက္ကစီနှင့် Uber အဖြစ်န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့အိုင်ဒီယာအပေါ်နေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ LeCab ပဲရစ်အငှားယာဉ်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကားများအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာပေးသည်။ နှင့် extensionally ကြီးထွားလာ ထို့အပြင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာ။
ဤတွင် Apply: http://www.bitaksi.com/en/
စီးရန်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်, Bi Taksi ကတစ်ဦးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အနာဂတ်မှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ။ ဒါကကုမ္ပဏီတူရကီအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်တူရကီအတွက်အကောင်းဆုံးတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဘယ်မှာမှမရှိပါကိစ္စလျှောက်ထားသို့မဟုတ်ပင်တူရကီလာ BiTaksi နှင့်အတူငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်အများကြီးပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုကြောင့်ပူဇော်အလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူစစ်မှန်သော-အီးမေးလ်ကိုရောက်လာကြည့်ရှုနိုင်သည်။ နှင့်သင့်ဖောက်သည်များခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ငွေသားအားဖြင့်ပေးဆောင်နိုင်ကြသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဒါမသန်စွမ်းဖောက်သည်ယူပြီး, သငျသညျအများကြီးပိုငွေရှာနိုင်ပါလိမ့်မည်.
Didi တက္ကစီ (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: http://talent.didiglobal.com/
Didi ဂျပန်နှင့်မက္ကစီကိုသြစတြေးလျ, ဘရာဇီး, တရုတ်အဖြစ်အများအပြားနိုင်ငံများတွင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါကြောင့်ဒီအကြည့်ရှိသည်ဖို့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကျိုးနပ်သည်။ သူတို့ကအတွေ့အကြုံရှိမန်နေဂျာများအဘို့ရှာကြသည်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရနှင့်နိုင်ငံတကာ။
Didi တက္ကစီကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အကောင်းတစ်ဦးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့နေရာလွတ်မှာကြည့်သင့်ပါတယ် စိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်.
get Transfer.com (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://gettransfer.com/en/carrier/new
ဤသည်ကုမ္ပဏီတွင်လက်ရှိစတင်ရန်သူတို့ရဲ့ရုံးပြောင်းရွှေ့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေ, သင်သည်သူတို့၏ website တွင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီကုမ္ပဏီကအရမ်းမကြာမီဒူဘိုင်းအတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ application ကိုဖွင့်လှစ်စောင့်ရှောက် gettransfer.com အတူ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့သင်ရုံမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖွင့်ကောက်နှင့်တစ်ဦးကိုရှေးခယျြ destination သို့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူတစ်ဦးကယ်နှုတ်မည်ဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်းအဖြစ်အလွန်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။
ပုဂ္ဂလိကခရီးသွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအလုပ်ကြိုးစားသူနှင့်အသည်းအသန်, output ကို-အာရုံစူးစိုက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လွှဲပြောင်းန်ထမ်းကိုရယူပါ။ ဒါကြောင့် GET Transfer.com သငျသညျကျိန်းသေအဓိကရူပါရုံကိုရရှိဆီသို့ဦးတည်အလုပ်လုပ်ကူညီပေးသည် ကာဘီလီယံကိုလူတို့အဘို့ mobility တည်ဆောက်။
ဤတွင် Apply: http://www.easytaxi.com/
လွယ်ကူသောတက္ကစီဆက်စပ် application ကိုအများကြီးပိုကိုလံဘီယာ, အာဂျင်တီးနားနှင့်မက္ကစီကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့၎င်းတို့၏စာမျက်နှာများမှာကြည့်ရှုရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအဒီကုမ္ပဏီမှာရုံးခန်းဖွင့်နိုင်သည် အောက်ပါနှစ်အတွင်းဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်မှရွှေ့.
သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုများကြည့်ဖူးသူသိတယ် သူတို့ကကမ္ဘာအဝှမ်းမှအတွေ့အကြုံရှိအလုပျသမားမြားအတှကျအခြို့သောအလုပ်အကိုင်များရှိစေခြင်းငှါ။ တဖန်သင်တို့ပင်လွယ်ကူတက္ကစီများအတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည်။
ဤတွင် Apply: https://grab.careers/
တစ်ဦးကကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီ! ဆုပ်ယူတဲ့ကားခကိုအဖှဲ့အစညျးမှာဖွင့်ဦးဆောင်စီးနင်းယူမှုကိုလျှောက်လွှာထက်ပို အရှေ့တောင်အာရှ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အတူနိုင်ငံစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကနေအရှေ့တောင်အာရှတလွှားငွေပေးချေမှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမှအရာအားလုံးတိုးတက်စေရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာစနစ်နှင့်အများဆုံးအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးနိုင်သည်။
ဆုပ်ယူကုမ္ပဏီအစိုးရစီမံကိန်းများနှင့်စနစ်များနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ အဖြစ်ကသူတို့ယာဉ်မောင်း, ခရီးသည်နှင့်ပရဟိတလုပ်ငန်းပျော်ရွှင်ကြသည်။ အားလုံးပျော်ရွှင်စွာဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်၌ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
ဆုပ်ယူတက္ကစီလူတွေကိုအလုပ်ရိုက်ထည့် (မျိုး၏) ဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာခြင်းကူညီခြင်းဖြင့်အာရှဒေသ၏စစ်မှန်တဲ့အလားအလာသော့ဖွင့်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
သူတို့ဟာအလွန်များပြားမှုသည်တိုးတက်မှုစီမံခန့်ခွဲသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနေကြသည်။ သငျသညျယာဉ်မောင်းအရှေ့တောင်အာရှရှေ့သို့၏ကုမ္ပဏီရူပါရုံကိုဝေမျှလိုလျှင်, ယနေ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကို join ဖို့လျှောက်ထား.
Taxify ကုမ္ပဏီ (နိုင်ငံတကာ)
ဤတွင် Apply: https://careers.taxify.eu/
Taxify ရုံ Uber ပြီးနောက်ဒုတိယကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Taxify ကုမ္ပဏီက Uber များအတွက်အလွန်ကောင်းသောပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာအဝှမ်းမှဒီကုမ္ပဏီကို အသုံးပြု. လူတွေအများကြီးစကားပြော။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစည်းရုံးရေးမှူးယူပြီး အကယ်. ကျနော်တို့ Uber ကုမ္ပဏီမှနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျိန်းသေတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောကြီးထွားလာအဖွဲ့အစည်းကိုရကြလိမ့်မည် သင်သည်လည်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်ရှိရာ။ ယခုအချိန်တွင်ဒီကုမ္ပဏီနှစ်ခုထက် ပို. -hand မူပြောင်းခြင်းရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျသငျနှငျ့အတူသငျသညျယေဘုယျအားဖြင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကြောင့်ပိုက်ဆံမောင်းနှင့်ဆပ်ဖို့ဆက်လက်နေဆဲ, မပြောတတ်နိုင်မဆိုငွေပေးချေရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အရေးယူမဆို Credit Card ကို အသုံးပြု. မရသောဤကုမ္ပဏီ၏နောက်ထပ်စမတ်စိတ်ကူး။ ကျနော်တို့ကတခြားတက္ကစီကုမ္ပဏီများသည်ဤကုမ္ပဏီနှိုင်းယှဉ်လျှင်ဒီတော့ကျနော်တို့ကဒီပြောပါလိမ့်မယ် ကျိန်းသေနှင့်အတူစတင်အလုပ်လုပ်မယ့်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဒါကကုမ္ပဏီသူတို့အဲဒီမှာသူတို့ရဲ့ဦးခေါင်းရုံးရှိခြင်းနေတိုးနီးယားအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေအပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုယူလျှင်သူတို့အိန္ဒိယယူနိုက်တက်အမရေိကနေဒါ၏ပြည်နယ်နှင့်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများအများကြီးအတွက်နိုင်ငံတကာတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကပြည်ပမှာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေလျှင် ဒီကုမ္ပဏီ အလုပ်အကိုင်ရဖို့ကျိန်းသေနေတဲ့စမတ်လမ်း.
မင်းမသွားခင်? - ဒူဘိုင်းအတွက်အကုသိုလ်အမှတ်!
ဒူဘိုင်းမှာတော့အကုသိုလ်အချက်များကားမောင်းနေတုန်းကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုများမှသင်၏ဒူဘိုင်းယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အပေါ်အမှတ်အသားများဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးကတော့ Uber ကားမောင်းသူဖြစ်လာစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည် သင်ရှိသည်မည်မျှအကုသိုလ်အချက်များကိုစစ်ဆေးဖို့ဘယ်လို။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ကားမောင်းထုတ်ပေးခဲ့သူလမ်းများ & ပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက် Uber ယာဉ်မောင်းဖြစ်လာအများကြီးပိုလွယ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေလျှင် ကောင်းသောအလုပ် site ကို။ ပင်မောင်းသူအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေလို့ပဲ။ သင် ... သင့်တယ် ဒေသခံတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်များဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေး။ ထိုအရပ်၌ထံမှယာဉ်မောင်းတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ရှာပါ။ ကံကောင်းပါစေ။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူဒူဘိုင်းယောဘ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် သင်သည်ထိုအိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ အစာရှောင်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်။
ရိုးရှင်းစွာအဒီမှာကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload နှင့်တစ်ဦးကိုစတင်ရန် ဒူဘိုင်းအသစ်ယာဉ်မောင်းယောဘသည်။